China Sichuan Congou umzi-mveliso iti Black kunye nabavelisi |Yibin Tea
SICHUAN CONGOU ITE EMNYAMA
IPhondo laseSichuan yenye yeendawo zokuzalwa kwemithi yeti eTshayina.Ngemozulu epholileyo kunye nemvula eninzi, ifanelekile kakhulu ekukhuleni kweti.Inkangeleko yeti emnyama ye-Sichuan congou iqinile kwaye iyinyama, ine-pekoe yegolide, ivumba elimnandi kunye nevumba leswekile e-orenji, incasa ithambile kwaye intsha, Isuphu yeti ibomvu kwaye isuphu eqaqambileyo.Eyona marike iphambili kuquka iUnited States, Ukraine, Poland, Russia, Turkey, Iran, Afghanistan, Britain, Iraq, Jordan, Pakistan, Dubai kunye namanye amazwe akuMbindi Mpuma.
Ide kwaye ibhityile ngeengcebiso zegolide, Umbala umnyama kwaye unamafutha, isuphu ebomvu
Ivumba elitsha nelimnandi
(1) Sebenzisa amanzi omthombo wentaba, amanzi omthombo, amanzi ahlambulukileyo kunye namanye "amanzi athambileyo" ane-calcium-magnesium ekusetyenzweni kwawo ukuqinisekisa ukuba amanzi matsha, awanambala, awanancasa, kwaye aneoksijini eninzi;Iti emnyama yeSichuan Gongfu ekumgangatho ophezulu yeyona ingcono ukwenziwa ngaphandle kwamanzi etephu.
(2) Iti emnyama yeSichuan Gongfu ayinakuvutyelwa ngamanzi abilayo abilayo ashushu ukuya kutsho kwi-100 ngokukaCelsius.Ngokukodwa iti emnyama ye-Sichuan Gongfu emnyama ephezulu eyenziwe kwihlumela lamagqabi eti, kufuneka ulinde amanzi abilayo ukuba aphole ukuya kuma-80-90 degrees Celsius ngaphambi kokubilisa.
(3) Beka i-3-5 grams yeti eyomileyo ngekomityi nganye.Iqamza lokuqala ukuhlamba iti, ngokukhawuleza aphume emanzini ukuhlamba ikomityi kunye nevumba elimnandi, ubude iqamza lokuqala ukuya kweyeshumi malunga: imizuzwana 15, imizuzwana 25, 35 imizuzwana, 45 imizuzwana.Ixesha lokukhutshwa kwamanzi linokulawulwa ngokokhetho lomntu.
(4) Sebenzisa iiseti zeti ezikhethekileyo.Ukongeza kokusela iti emnyama ye-Sichuan Gongfu, kufuneka uxabise ukudilika kunye nokwelula kwamagqabi eti emanzini, ngoko ke kungcono ukusebenzisa ikomityi yeglasi ekhethekileyo esetelwe iti emnyama ukwenza utywala.
(5) Galela malunga nesinye eshumini samanzi ashushu kwikomityi ukutshisa ikomityi, uze ubeke i-3-5 yeegram zeti, uze ugalele amanzi eludongeni lweglasi yokusela.Amagqabi eti azakunwenwa ekomityini.Ivumba elimnandi elikhethekileyo.
Iinzuzo zokusela iti emnyama yaseSichuan Congou
I-flavonoids kunye ne-tea polyphenols equlethwe kwiti emnyama ngamalungu endalo e-antioxidant, anokuphucula amandla e-antioxidant emzimbeni kwaye asuse iiradicals zasimahla emzimbeni.Ezi zizizathu ezibalulekileyo zokuguga kwabantu, kwaye iimpendulo ze-oxidation zinciphisa inkululeko.Emva kokuba isiseko sinyamalale, iimpawu zokuguga komntu aziyi kubonakala.
Ukusela iti emnyama ngakumbi ngamaxesha aqhelekileyo kunokuphucula amandla omzimba okulwa nokudinwa, kuba icaffeine equlethwe kwiti emnyama inokonwabisa intliziyo kunye nemithambo yegazi, ikhawulezise ukujikeleza kwegazi, kwaye ikwakhuthaze imetabolism ye-lactic acid emzimbeni. ukujika kubangela umzimba Ubukho obubalulekileyo bokudinwa, emva kokuba inani layo lincitshisiwe, umzimba womntu awusayi kuphinda uzive udiniwe, kwaye uya kuziva unamandla ngakumbi.
Ngaphambili: CTC 2 # iti emnyama
Okulandelayo: Iti emnyama eyaphukileyo